Kutheni Itafile? I-software eyona nto ifanelekileyo yokuboniswa kwedatha
Yintoni iTableau? Kutheni iTableau yiyona ndlela iComputer Intelligence Software
Kutheni Ithenda yokusheba kwiMarike
Ngaba Idatha Enkulu
Itafile Ngaba kukho nawuphi na iDatha
Ukutshitshisa, ukuBoniswa kwamaTekisi
Ukufanisana kwiiplatifti ezininzi
Itheyibhile yiNkokeli yezoNkampani
I-2 Iikholeji zoQeqesho ezibalulekileyo zeTableau kunye neZatifikethi ezinceda kwi-Data Visual
I-Tableau Desktop eziBalulekileyo Izivakalisi ezijoliswe kuko
2. Itafile yeDeskithophu yeCandelo loQeqesho oluPhambili kunye neZatifikethi
Abaphulaphuli beeDesktop eziPhambili
I-Preqisite yeTable Desktop ephakamileyo
Itafile ibonakala kwesoftware yokubona idatha yedatha eyenziwe yiTebhu yeSoftware. Itheyibhile inxulumana ngokuzenzekelayo phantse nawuphi na umthombo wedatha, kuba yi-corporate Data Warehouse, iMicrosoft Excel okanye idatha yekhompyutha. Ithebula liqwalasela ingqiqo yenkcazelo ngokutshintsha idatha ibe yimibono engenayo, enembile ebizwa ngeedashboard. Le nkqubo ithatha imizuzwana nje okanye imizuzu ngokuchasene neenyanga okanye iminyaka, kwaye iyafezwa ngokusebenzisa okulula ukusebenzisa umsebenzisi onembile. Kutheni Itafile?
Ithebhile yayijoliswe ekujongeni nasekuphandeni idatha ngendlela ehambelanayo, elula ukuthatha emva koko. Ezi ziphumo kwixesha elincinci lokuphucula, okwenza idatha yakho ibonakale ihamba phambili. Isakhono sokulungelelanisa kwiimarike ngokukhawuleza sisandla esiphezulu. Itafile inika amandla ekukhetheni ukhetho olukhawulezayo lwezoshishino olusekelwe kwidatha yakho, kukunika indawo efanelekileyo.
Uviwo lweedatha aludingeki lube lukhuni, kodwa kuninzi iinkalo zokujonga iinkcukacha zenza loo ndlela. Itheyibhile inikezela ngokuphazamiseka okungenanto, ukugxininisa kwizinto ezibalulekileyo kakhulu - ukufumanisa ixabiso kwi-data yakho. Uluhlu olucacileyo olubhekiselele kumboniso alukho nzima kunzima ukufunda, oko kuthetha ukuba akufanele ube yi-virtuoso yedatha ukuyisebenzisa.
I-Hailed ye-Big data yophando, i-Table ibonisa ukuphatha amanyathelo angenakunzima kwedatha kubonakala kulula. Itafile zingakwazi ukudibanisa kwaye zibonise idatha ephezulu kunabo nayiphi na isofthiwe yokumelwa kwedatha ekhoyo, kungakhathaliseki ukuba idatha yakho ibanzi kangakanani.
Yonke idatha eyenziweyo ilingana neTable. Ukusetyenziswa okulula ukuyisebenzisa kusetyenziswa imoto yedatha ngokukhawuleza ukuba iinkqubo zedatha ezivela kwimithombo eyahlukileyo engaqhelekanga. Akusekho isidingo sokuxininisa malunga nesofthiwe yokubona idatha ekusebenziseni ngombono wakho, kuba iThebula yenza konke.
Mhlawumbi inqaku elikhethiweyo elikhethiweyo I-Tableau inabalandeli abangaphezu kwamandla abo ukudala ukubonakaliswa kwedatha emangalisayo. Dlulela phambili, iThebhile inikezela ukubonakaliswa kwedatha yokubambisana nesebenzisi yesoftware yolwazi.
Ithebhile ishintshe icandelo lophando loshishino ngokwenza ukuqonda kuvuleke ngokukhawuleza kunoma ubani-nokuba ingafowuni yefowuni, inkqubo yewebhu, i-iPad okanye ifowuni.
Ithebula lizuze iindumiso ezingenakubalwa kuzo zonke i-shishini lolwazi lwezoshishino kwaye lijika ngokukhawuleza kumgangatho wokujonga kwedatha esemgangathweni.
Ithebula liye laphumelela kwiingcali zoshishino zengqondo kwiGartner njengoko isigaba seBI sesigqibo.
Uluhlu lweDeskithophu eyintloko
Uludwe lweDeskrini oluPhambili
1. Ikholeji yeDesktographic Fundamentals Training Course & Certification
Funda isikhungo kwizakhono zekhompyutheni kule nkqubo ngaphambili. Uza kuthatha iprogram yokuqwalasela uvavanyo lweedatha kunye nesicwangciso esibonwayo kwiTable, kwaye uqaphele indlela yokwenza izinto ezibonwayo kunye needashbhodi ezinengqiqo.
Eli khosi lenzelwe ukuba umfundi abe phakathi kwinqanaba lomzila weTeau Client. Kuyo nawuphi na osebenza kunye nedatha - ukuthobela ingqalelo encinane kwisiseko esikhethekileyo okanye esisisiseko. Le khosi injongo ekuncedeni ukuqonda nokusebenzisa iingcamango eziphambili kunye neenkqubo kwiTable ukuhamba ngokulula ukuya kwiinkomfa ezintle kwaye ubone indlela yokuzihlanganisela kwiedashbhodi ezinengqiqo.
Ekupheleni kwesi sifundo, uya kuba namandla oku:
Hlanganisa nedatha yakho.
Shintsha kwaye ugcine umthombo wedatha.
Qondela igama leTableau.
Sebenzisa i-Tableau interface / i-worldview ukuze wenze ngokwaneleyo imbono efanelekileyo.
Yenza iimpawu eziyimfuneko kubandakanywa inani elisezantsi lokulinganisa, ukuqokelela ngokweziko kunye nokulinganisela, imathematika yamaphepha, kunye neenkomfa zeetrafti ze-snappy.
Thetha kwidatha yakho usebenzisa iintlobo zokumela ezilandelayo:
I-Pie ichaza kwaye ibrafu
I-hub ephindwe kabini kunye neegrafu ezidibeneyo kunye neentlobo zeengheke ezahlukeneyo
Amashishini okushicilela ukwabelana ngemibono.
Phanda iifayile zeDesktop zezinto ezikhethekileyo kwaye uhlalutye ngakumbi kwi-data yakho. Uza kufunda ukusetyenziswa okuxhomekeke kwiimpawu zemiqondiso kunye neenkqubo zegrafu ezenza uvavanyo lokungena kunye needashbhodi.
Ngaba ungathanda ukuba ngumthengi weTebhu ephucukileyo enza iimpawu ezichaphazelayo? Kule khosi, uya kuqonda ukuba ungayifumana njani ngakumbi kwiDeskithophu yeDeskithophu ngokuzifaka kwiifayile kunye nokuzisebenzisa kwiimeko zinyani. Oku kuya kunceda ukuqonda xa kubalwa itafile, ukuqikelela okanye i-LOD kufuneka isetyenziswe kwaye xa igubungela. Uya kuphucula ukuqonda indlela yokwenza ngokulungelelanisa ukulungelelanisa kwaye uhlele iziphakamiso zakho. Oku kuya kwenziwa ngeemeko ezithile ngokukhawuleza ixesha, i-geographical, kunye nedatha yokuhlaziya. Ngaphambi kokuphela kweli khosi uza kuba neendlela eziphambili zokucwangcisa ubuchule bokucwangcisa kunye neenkomfa zokwenza uphando nophando kunye needashbhodi.
Le nqanaba lezinga eliphezulu. Iziganeko kufuneka zibe nokuqonda okuqinileyo kwezicatshulwa kwiTable ngaphambi kokuya kweli klasi. Kunqunywe ngokugqithiseleyo ukuba ama-understudies asebenze ideskithophu ye-Desktop I kunye ne-Desktop II okanye iingcamango ezilinganayo ngaphambi kokuba uye kwi-Desktop III.
Faka iifayile ezenzelwe ukunyusa ulwazi olongezelelweyo kwi-data yakho
I-Fuse i-outline ye-outline yohlobo lwenu yophando lwakho
Faka isicelo ukuqhubela phambili kwiidashboarding
Sebenzisa iifayile, iipameters, kunye nokulinganisela kwetafile
Sebenzisa iindlela zeTableau ukujongana neshishini eliqhelekileyo usebenzisa amatyala
Hlela iingcinga zakho kunye needashbhodi ngenxa yempembelelo enkulu
Phanda umzekeliso wemeko yezoqoqosho
I-10 Iikholeji zokuQala eziQhulayo kwi-Software Ukuvavanya kunokukwenza ube ngumgidi-mali